WAR CUSUB: Fabio Borini oo berri caafimaadka u maraya AC Milan! (Conti, Calhanoglu & Klinic oo ay ku raad joogto) – Gool FM
Warar hadda soo baxaya ayaa sheegaya in AC Milan ay Sunderland kula heshiisay Fabio Borini, kaasoo berri Milano u imanaya inuu caafimaadka maro.
Laacibkan caalamiga ah ayaa aad u xiisaynayay inuu iskaga dhaqaaqo kooxda Black Cats oo heerka 2-aad u laabatay, waxaana aad loola xiriirinayay kooxda SS Lazio.
Yeelkeede, MilanNews, Calciomercato.com iyo Gazzetta dello Sport ayaa isku wada raacay inuu laacibkan 26-jirka ihi la heshiiyay kooxda Rossoneri oo uu berriba caafimaadka u mari doono.
Mian ayaa la sheegayaa inay laacibkan ku bixisay €6m [£5.3m] isagoo kooxda Ingiriiska ah ugu fadhiya £8m oo ay ku keensatay 2015, isagoo fasalkii tegey u saftay 26 kulan 2 goolna u dhaliyay. Wuxuu usoo dheeley Chelsea, Roma iyo Liverpool oo uu 36 gool u dhaliyay isu gayn dhan 166 ciyaarood.
Dhanka kale, kooxda Rossoneri oo aad ugu firfircoon suuq-xagaagan ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda ama ugu badnaan 48 saacadood ay kusoo afjaraan heshiis ay ku keensayaan Hakan Calhanoglu oo ka tirsan Bayer Leverkusen balse heshiis afka ah la gaarey Milan.
Milan ayaa la diyaar ah lacag ku dhow 25 milyan oo euro oo kala ah 20 milyan iyo bareemiyo sida uu qorayo Il Giornale, waxay sidoo kale Milan berri ama saadambe soo afjaraysaa heshiiska Andrea Conti iyadoo sidoo kale wada hadal kula jirta Nikola Klinic.
Florentino Perez oo Man Utd ku eedeeyay inaysan beec qabin
''Ma jiro heshiis la dhameeyay oo uu Milan Skriniar ku aadayo Inter'' - Wakiil